Obbo Mardaasa Raaga Joteh Tullu du'aan boqootani jiru
Waraa Jotee Tuluu Dhaloonni sadi Waraa Bilisummaaf qabsa’ee
(Gumii Paarlamaa Oromoo) – Obbo Mardaasa Raagaa Amajjii 24 bara 1946 Abaa isaa Obbo Raagaa Jotee fi Haadha isaa Adee Jituu Makada irra Anaa Ghidami naannoo Wallagaa Oromiyaa keesati dhalate Onkoloolessa 30 bara 2012 dhibee Onee dhukubsate Hospitala Hawardiiti oso yaalama jiru adunyaa kanaraa darbee jira. Du’aatin qabsa’aa Obbo Mardaasa Jotee Oromoota heeduf gadda gudda akka ta’u waan bekame.
Akkaakayun Obbo Mardaasa, Obboo Jotee Tuuluu koloneefata Minilikiin harkaa fi mila isaa sibilaan hidhamee akka du’ee seenaan yo yaadatu akkasumas abbaan isa Obbo Raagaa Jotee Mootumaa Hayilasilaasetin Ankoobar keesati hidhamee achiti akka ajeefame seenan ni ibsa.
Dhaloonni sadi (3) guutuun walitti aansee sirna gabroomfataa Habashaa jalatti osoo dararamanuu, lubbuun maatii guutuun bifa kanaan dhumuun hedduu nama gaddisiisa. Haga nuti (Oromoon) diina tajaajiluu dhiifnee mirga keenyaaf falmachuudhaan diina jalaa banuti du’iif fi dararami Oromoo irrati rawwatamun hinoluu kanaafu Oromoon bakka jiru qabsa’ii akka wara Jotee Tuluu ni bilisoomta.
Obbo Mardaasa Jotee of biraa dhabun bayee nu gadisisee jira. Waaqini guraachi Oromoo lubuu isaa walabu keesa nuf haa galchu akkasumas froota fi jaaleewan isaaf obsaa fi jajabina haa keenuuf.